Nkwagide - Nkwakọ ngwaahịa na mbipụta CO., LTD
Anyị na -agbasi mbọ ike na -azụ ahịa na -adigide iji nye ndị ọrụ anyị, ndị ahịa anyị, ndị gbara anyị gburugburu na gburugburu anyị uru dị ogologo oge.
Mita nkwado anyị
● belatara oke mmiri anyị site na 19% n'afọ 2014-15 site na mmefu ego gara aga
Belatara mkpofu anyị dị ize ndụ iji jupụta na 80% n'afọ 2014-15 site na mmefu ego gara aga
Ọnọdụ nkwado nke 'Zero Liquid discharge' site na ogige
●Ebelata anwuru ikuku griin haus site na izute 95% nke ike anyị chọrọ site n'ike dị ọcha sitere na ụlọ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ụlọ anyị dọtara n'agha.
● Mụbara ọkwa mmiri ala na saịtị anyị site na ịgbanye mmiri mmiri na-arụ ọrụ ma na-agafe agafe site na sistemụ owuwe ihe ubi mmiri ozuzo nke ụlọ ọrụ.
Gburugburu ebe obibi, ahụike & nchekwa (EHS)
Nchekwa Ebe Ọrụ
Ụzọ anyị si ebido Nchedo nke mbụ bụ nke amụma EHS, ebumnobi, atụmatụ ime ihe na atụmatụ maka njikwa nchekwa. Omume ọrụ anyị kwekọrọ na sistemụ njikwa OHSAS 18001: 2007. Anyị belatara 46 % ndekọ ndekọ ndekọ ihe anyị mere n'afọ 2014-15 site na mmefu ego gara aga.
A na -akwado ọrụ nchekwa ọkụ iji chekwaa ndụ ma belata ohere nke mmerụ ahụ na mmebi ihe onwunwe site n'ọkụ. A na -enyocha, na -echekwa, na -arụ ọrụ ma na -arụ ọrụ na -arụpụta nrụpụta na akụrụngwa anyị na -erube isi n'iwu ndị dị adị yana ụkpụrụ anabatara maka nchedo ọkụ na nchekwa.
Iji nye ndị ọrụ anyị nchekwa kacha mma, EPP ewepụtala ntuziaka siri ike maka nchekwa ahụike, nchekwa ọrụ yana iji akụrụngwa nchedo onwe onye (PPEs). Anyị na -etinye nzaghachi kwesịrị ekwesị maka ọrịa ọrụ na mmerụ ahụ.
Ahụike gburugburu ebe obibi
Anyị na -agba mbọ inweta ọmarịcha n'iduzi omume dị mma na gburugburu ebe obibi anyị na -emepụta nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe. EPP nwere sistemụ njikwa gburugburu ebe obibi (ISO 14001: 2004). Ebumnuche nke EHS anyị na mmetụta gburugburu ebe obibi dị mkpa metụtara ikuku sitere na saịtị anyị, iji akụ sitere n'okike, mwepụ gburugburu ebe obibi na mkpofu iji jupụta ala. A na -echekwa gburugburu ụlọ ọrụ ahụ na nrube isi n'iwu na iwu niile. Nọmba ndepụta ikuku anyị (AQI) dị n'ime otu afọ ojuju nke ụlọ ọrụ gọọmentị na -eji. Ihe karịrị ụzọ abụọ n'ụzọ atọ nke ogige anyị kpuchiri ahịhịa ndụ ahịhịa ndụ.
EPP Environmental, Health & Safety Policy
Anyị kpebisiri ike ịrụ ọrụ azụmahịa anyị na -atụle gburugburu, ahụike & nchekwa dịka akụkụ dị mkpa yana n'ime nke a:
● Anyị ga -egbochi mmerụ ahụ, ahụike na mmetọ ndị ọrụ na obodo anyị site na ịnakwere usoro ọrụ dị mma.
Anyị ga -ekwenye na ihe iwu chọrọ na nke metụtara nke metụtara ihe egwu EHS.
● Anyị ga -edobe ebumnobi na ebumnuche EHS, na ịtụle ha kwa oge, iji na -aga n'ihu na -aga n'ihu na arụmọrụ EHS nke nzukọ a.
Anyị ga -etinye ma zụọ ndị ọrụ anyị, yana ndị ọzọ metụtara ya, ka ha wee rite uru na arụmọrụ EHS nke nzukọ a ka mma.